Vaovao - Ahoana no nahombiazan'ny indostrian'ny labiera? Jereo ny bara fandrosoan'ireto firenena ireto
Nisokatra tsirairay ny trano fisotroana sy fisakafoanana, miaraka amin'ny famerenana ny toekarena amin'ny alina sy ny harinkarenan'ireo fivarotana amoron-dalana, ny tsena labiera eto an-toerana dia naneho ny faharetan'ny fanarenana. Ka ahoana ny amin'ireo mpiara-miasa vahiny? Ireo mpamaky labiera amerikana izay efa niahiahy ny tsy ho tafavoaka velona, ​​ny bara eropeana tohanan'ny voucher toaka, ary ny labiera sasany. Mety ve izy ireo izao?
Angletera: hisokatra ny bar amin'ny 4 Jolay raha ela indrindra
Nilaza ny sekreteran'ny varotra anglisy Sharma fa ny fisokafan'ny bara sy trano fisakafoanana "aloha indrindra" dia tsy maintsy miandry hatramin'ny 4 Jolay. Vokatr'izany dia hikatona mandritra ny ora maro ny trano fisotroana britanika amin'ity taona ity.
Na izany aza, tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, bara maro any Angletera no manolotra labiera fakana entana, izay tena tian'ny mpimamo. Betsaka ireo mpitia labiera no nankafy ny labiera labiera voalohany am-bolana maro teny an-dalana.
Ny bara any amin'ny firenena eropeana hafa koa dia misokatra na efa hisokatra indray. Teo aloha, orinasa labiera maro no namporisika ireo tia labiera hividy tapakila mialoha hanohanana ireo bara mihidy vonjimaika. Ankehitriny, rehefa afaka misokatra ireto bar ireto, dia labiera 1 tapitrisa mahery amin'ny labiera maimaim-poana na mialoha no miandry ny fahatongavan'ireo mpisotro.
Aostralia: ny mpivarotra divay dia mitaky ny fampiatoana ny fampiakarana hetra amin'ny alikaola
Araka ny fampitam-baovao avy any ivelany, ny mpamokatra labiera, divay ary divay aostralianina, hotely sy klioba dia niara-nanolo-kevitra tamin'ny governemanta federaly hampiato ny fampiakarana hetra amin'ny alikaola.
Brett Heffernan, tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Australian Brewers Association, dia mino fa tsy izao no fotoana hampiakarana hetra amin'ny fanjifana. "Ny fampiakarana ny hetra labiera dia ho kapoka iray hafa ho an'ny mpanjifa sy ny tompona trano fisotroana."
Araka ny filazan'ny Australian Alcoholic Beverage Company, ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola any Aostralia dia nianjera mafy noho ny fiantraikan'ilay valanaretina satro-boninahitra vaovao. Tamin'ny volana aprily, ny fivarotana labiera dia nilatsaka 44% isan-taona ary 55% isan-taona ny varotra. Tamin'ny volana Mey, ny fivarotana labiera dia nilatsaka 19% isan-taona ary ny varotra dia nidina 26% isan-taona.
Etazonia: 80% amin'ireo mpamaky labiera no mahazo famatsiam-bola PPP
Araka ny fanadihadiana farany nataon'ny American Brewers Association (BA) momba ny fiantraikan'ny valan'aretina amin'ny labiera mpanao asa-tanana, maherin'ny 80% ny mpamaky labiera no nilaza fa nahazo famatsiam-bola tamin'ny alàlan'ny Program Payroll Protection Program (PPP) izy ireo, izay mahatonga azy ireo hatoky tena bebe kokoa momba ny ho avy. fahatokisana.
Antony iray hafa amin'ny fitomboan'ny fanantenana dia ny fanjakana amerikanina nanomboka nisokatra ho an'ny asa aman-draharaha, ary amin'ny ankamaroan'ny fanjakana, ny labiera dia voatanisa ao amin'ny lisitry ny asa navela teo aloha.
Saingy nianjera ny varotra ankamaroan'ny mpamaky labiera, ary ny antsasak'izy ireo dia nilatsaka 50% na mihoatra. Manoloana ireo fanamby ireo, ankoatry ny fangatahana fampindramam-bola ho an'ny programa antoka, ny mpanamboatra labiera koa dia mampihena ny vidiny araka izay tratra.